प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण : त्रीदेशिय विकास साझेदारी र रेलवेमा जोड
यहि चैत १० गते विगतका सहमतीको कार्यन्वयन र सम्वन्ध सुदृढ गराउने मुख्य लक्ष्य लिएर चीन गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुख्य छलफल र भेट सकाए । हतारोमा पत्नी सीता दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत,
कस्तो देखिँदैछ ! चुनाव हत्याउने प्रमुख दलहरुको योजना
काठमाण्डौँ । बैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनका लागि आफ्ना उमेरदवार कसरी विजयी गराउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा प्रमुख दलहरु लागेका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा लगायतका दलहरु निर्वाचन घोषणापत्र तथा
भारतिय हस्तक्षेपका विरुद्ध विरोध हैन कुटनितिक पहल गरौँ
रघुनाथ बजगाँई, फागुन, २०७३। गएको सोमवार कञ्चनपुर पुर्नवासममा भारतिय सिमा सुरक्षाबल एसएसबीको गोली लागी गोविन्द गौत्तमको मृत्यु भए पछि नेपाल÷भारतका सिमा विवाद र दुई देशको सम्वन्धको चर्चालाई शिर्ष नेतृत्वले सतहमा ल्याएको
३ बुँदे सहमतीका हस्ताक्षरकर्ताहरु कतातिर खै !
रघुनाथ बजगाँई, फागुन, २०७३। वर्तमान सरकार गठनअघि संविधान संसोधन गर्ने सहितका ३ बुँदे सहमतीका हस्ताक्षरकर्ता दलहरु बुधवार ३ घण्टा भन्दा बढि छलफलमा जुटे । मधेसी मोर्चाले निर्वाचन भन्दा पहिले संविधान संसोधन विधेयक
सिमरा गोल्डकपबाट १५ लाख बचत
काठमाडौँ, १३ फागुन । मोफसलकै प्रतिष्ठित फूटवल प्रतियोगिता सिमरा गोल्डकपको आठौं संस्करणबाट १५ लाख रुपैया बचत भएको छ । आयोजक नव जनजागृति युवा क्लबले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिताबाट १५ लाख
राप्रपाको अध्यक्षमा पूनः निर्वाचित थापाको प्रसंसा
आज मन धेरै खुसि छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा कमल थापा अध्याधिक बहुमतले निर्वा्चित हुनु भएको छ । उहाँलाई धेरैधेरै बधाइको साथै सफल कार्यकालको सुभकामना ब्यक्तm गर्न चाहे । हिजोको
दलिय पत्रकार र प्रभुको आर्शिवाद
रघुनाथ बजगाँई, फागुन । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य एवं कर्णालीका एक जना बरिष्ठ पत्रकारलाई सामान्य टेलिफोन कुराकानीमा सोधेँ महासंघको चुनाव कत्तिको लागेको छ ? उनले जवाफ दिए “ यसपाली खास
नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो नलिन आग्रह
काठमाडौँ, २ फागुन । भारत भ्रमणमा रहनुभएका नेकपा(माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो नलिन भारतीय नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आज भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसका
आमाछोरा, दिदीभाईले ज्योति मगरको प्रस्तुती कसरी झेले होलान् ?
बिशाल कार्की । दाङको तुलसीपुरमा माघ १३ गतेदेखि सुरु भएको मध्यपश्चिम व्यापारीक तथा पर्यटन महोत्सव एवं औद्योगिक कृषि मेलामा २१ गते ज्योति मगरले देखाएको प्रस्तुतीलाई लिएर आयोजकको चर्काे आलोचना भइरहेको छ । ज्योतिको
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको पहुँच बाहिर
ओम प्रकाश यादव, मंसिर २०७३ । सरकारले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गरेको भएपनि बाराका अधिकाशं गाउँका सर्वधारणले अझैपनि यसको अनुभुति गर्न सकेका छैनन् । जिल्लाका सवै स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने निशुल्क
नागरिकले चाहेको विकास तुहिने पो हो की !
निरोजकुमार थापा/ विकास भन्ने वित्तिक्कै बाटो, कुलो, पुलपुलेसा, खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधारहरु आम सर्वसाधारण नागरिकले उपभोग गर्न पाउने
शालिक ढल्दैमा विचार ढल्न सक्छ र ?
बहालवाला मन्त्रीहरु कूटनीतिक मर्यादा कुल्चिंदै
अहं, आक्रोश र आग्रह
ब्लग : बाबासँग बाबुराम
सर्वहारा क्रान्तिमा अपरिहार्य खस मोर्चा